Best Ewepụghị Bottom Pouches Manufacturer na Factory | Guoshengli
Akpụkpọ ụkwụ dị ala bụ ọkacha mmasị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ihe oriri, na-ewu ewu karịa. Ha nwere ọtụtụ aha, dị ka ngọngọ ala obere akpa, igbe obere akpa, obere akpa brik, akpa ala, na ihe ndị ọzọ. E wezụga nke ahụ, igbe igbe na-adịwanye jụụ na shelf ma dị mfe nchịkọta iji na-enye ndị na-ere ahịa na ndị na-azụ ahịa ihe dị mma, nke ga-eme ka asọmpi ahịa ahụ dịkwuo mma, ma na-enye aka na ngwaahịa na-ewu ewu na mgbasa ozi.
Ewepụghị Bottom obere akpa Description
Akpụkpọ ụkwụ dị ala bụ ọkacha mmasị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ihe oriri, na-ewu ewu karịa. Ha nwere ọtụtụ aha, dị ka ngọngọ ala obere akpa, igbe obere akpa, obere akpa brik, akpa ala, wdg. Ha bụ 5-kwadoro, na-eme ka arịrịọ dị mma na ogwe ise nke mbipụta mbipụta ederede iji gosipụta ngwaahịa gị ma ọ bụ akara gị nke ọma. E wezụga nke ahụ, igbe igbe na-adịwanye jụụ na shelf ma dị mfe nchịkọta iji na-enye ndị na-ere ahịa na ndị na-azụ ahịa ihe dị mma, nke ga-eme ka asọmpi ahịa ahụ dịkwuo mma, ma na-enye aka na ngwaahịa na-ewu ewu na mgbasa ozi.
Esi tụọ obere obere akpa na zipa?
Companylọ ọrụ na Brief
Anyị na-pụrụ iche na ahaziri mgbanwe nkwakọ n'ihi na ihe karịrị afọ 20. Dị ka a Premiya mgbanwe ebi akwụkwọ na n'ịtụgharị ụlọ ọrụ, anyị na-enye nkwakọ ngwọta na 10-agba usoro ebi akwụkwọ na a dịgasị iche iche nke film gauges na widths, si akpaaka-nkwakọ mpịakọta film ka dị iche iche iche iche nke preformed pouches na a dịgasị iche iche nke nha, ihe, imewe na atụmatụ dị elu. Site imewe ka n'ịtụgharị, anyị na-agba mbọ na-enye onye-nkwụsị ọrụ na-anabata na ọkachamara nkwurịta okwu.
2 akụkụ akara akpa / obere akpa 3 akụkụ akara akpa / obere akpa 4 akụkụ akara akpa / akpa
Ohiri isi akpa / obere akpa ewepụghị akpa / obere akpa ebili akpa / akpa
akpa gusset akpa / obere akpa quad akara akpa / akpa ewepụghị ala akpa / pouch
zipa akpa / obere akpa Akpa akpa / akara akpa fin / apata akara akpa / akpa
Central akara akpa / obere akpa ahaziri udi akpa / obere akpa retort akpa / obere akpa
spout akpa / obere akpa plastic film mpịakọta / mpịakọta film Ihe nkiri mkpuchi
More Flat Bottom Pouches Foto
Nweta ihe nlele efu ------ gbalịa tupu ịzụta!
A na-enweta ego maka akpa maka gị. Ọ na - enyere gị aka ikpebi azịza nkwakọ ngwaahịa zuru oke maka akara na ngwaahịa gị pụrụ iche. Even nwedịrị ike ịhọrọ akpa na agba ịchọrọ ịlele!
Rịọ ihe atụ n'efu taa!
Nke gara aga: Mpempe Akwụkwọ Gusseted
Osote: Ekike obere akpa